नेकपाको समीकरण उथलपुथल, ओली र प्रचण्ड विरुद्ध तयार गरे अर्को गुट ! « Bagmati Online
नेकपाको समीकरण उथलपुथल, ओली र प्रचण्ड विरुद्ध तयार गरे अर्को गुट !
काठमाडौंं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक आइतबार पुनः बस्दैछ । बैठकमा केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड(माधव पक्षवीच अल्पमत(बहुमतको खेल जारी नै छ । तर, केही स्थायी कमिटी सदस्यचाहिँ ओली र प्रचण्डको भन्दा अलग्लै धार बनाउने प्रयासमा छन् । आफूलाई ओली वा प्रचण्ड(माधवको गुटमा सहभागी नगराई स्वतन्त्र भूमिकामा राख्न चाहने स्थायी कमिटीका सदस्यमध्ये एक हुन् हरिबोल गजुरेल । पूर्वमाओवादी नेता एवं सांसद गजुरेल प्रचण्ड वा ओली कसैको पनि गुटमा नरहेको बताउँछन् ।
स्थायी कमिटीमा स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्ने गजुरेलले नेकपाको समस्या समाधान गर्ने सूत्र पनि बेग्लैखालको प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न दिनुपर्ने र आगामी निर्वाचनसम्मै महाधिवेशनमा नगई प्रचण्डलाई नेकपाको एकल अध्यक्ष बनाउनुपर्ने गजुरेलको प्रस्ताव छ । उनी भन्छन्, ‘भदौ २६ मै फर्किएर मात्रै हुँदैन । अबको निर्वाचनसम्म महाधिवेशन हुँदैन । त्यसैले अबको विकल्प भनेको एउटा प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्ष हुने । स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँ केपी ओलीलाई विश्वास छ र यसले विवेकपूर्ण निर्णय लिन्छ भन्ने सन्देशसहितको पत्र पठाउनुभएको छ । दोस्रो, अध्यक्ष पनि मेरो अन्तिम हो र प्रधानमन्त्री पनि अब हुन्न भन्नुभयो । प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि म पार्टी र एजेण्डा अहिलेको व्यवस्था बचाउन आवश्यक परे पद त्याग गर्न पनि तयार छु भन्नुभयो । यसलाई सकारात्मक छलफल शुरुमा लिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
प्रचण्ड र ओली दुवै गलत
स्थायी समिति सदस्य गजुरेलले प्रचण्ड र ओली कमरेड सही ठाउँमा उभिदिएको भए यो हालत हुन्थ्यो ? यस्तो गाईजात्रा हुन्थ्यो ? अहिले जग हसाँउने काम भएको छ कि छैन ? दुई तिहाइ नजिकको, चारवटा प्रधानमन्त्री भएको पार्टी र अहिले पनि कार्यकारी भएको पार्टी अनुसार, के गर्‍यौं त ? भन्दै आक्रोस ब्यक्त गरे। यो, ऊ, छोडौं न । अहिले त परिवर्तन नै धरापमा पर्ने चिन्ता भइरहेको छ । हामी जति कमजोरी गर्दै जान्छौं, अर्कोको मनोवल त उति नै बढ्दै गएको छ नि । दबिएका शक्तिको मनोवल बढ्दै गएको छ, अनि असन्तुष्ट मानिसको समर्थन त्यहीँ पुग्दै गएको छ ।
आक्रोश र आवेग त्यहीँ व्यक्त भइरहेको छ । आक्रोशमा मान्छेको विवेक हराउँछ । यसलाई उहाँहरु ओली र प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ र सुधार्नुपर्छ । उपलब्धी जति भयो, त्यो उहाँहरुकै कारण हो । तर, जति समस्या आएको छ, त्यो पनि उहाँहरु ओली र प्रचण्डकै कारण हो ।
एकता कायम राख्ने आधार के हो ?
केही सोचेको छु यहाँ भन्दिनँ । मैले बैठकमै भन्नुपर्छ । केही साथीहरुलाई भनेको छु भदौ २६ ले पुग्दैन । त्योभन्दा अगाडि बढ्ने विकल्पबारे कुराकानी भइरहेको छ । एउटा अध्यक्ष र एउटा प्रधानमन्त्री भन्ने प्रस्ताव आजको भोलि नहुन सक्छ ।
तपाईं(हामीलाई थाहा छ, चुनवाङ बैठकमा कस्तो अवस्था थियो भन्नेबारेमा । प्रचण्ड, बाबुराम, बादल रुवाबासी र अँगालो हालाहाल १ त्यसपछि एक ठाउँमा उभिएको होइन ? अन्तरसंघर्ष हो नि । बाबुराम कारवाहीमा हुनुहुन्थ्यो । कुन परिवेशमा थियो ? तर, त्यही चुनवाङको बैठकले नयाँ परिस्थिति बन्यो नि । त्यो यहाँ हुन सक्दैन रु तर, हामीले त्यो हाई जम्पिङ खालको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले स्थायी कमिटीको अग्नि परीक्षा आएको छ । सचिवालय आफ्नो भूमिकामा चुक्यो, चुक्यो । तर, स्थायी कमिटीले एउटा निकास दिन्छ ।